MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA CAIRN TERRIER - EEYAHA
Anabelle the Cairn Terrier oo 11 jir ah
Liistada eeyaha Cairn Terrier Mix
Terr Cairn waa Terrier yar oo adag oo leh muujinta dawacada u eg. Madaxa waa mid ballaadhan oo u dhigma dhererka. Xuubka adag waa dherer dhexdhexaad ah oo leh joogsi qeexan. Ilkaha waxay ku kulmaan maqas ama qaniinyo heer ah. Sanku waa madowyahay. Indhaha qoto dheer, ballaaran ayaa leh midab dhalaal leh oo leh sunnayaasha ruxruxa iyo topknot. Dhegaha kacsan waa yar yihiin oo waa la kala sii ballaadhiyaa, oo lagu daboolay timo gaagaaban. Dabada ayaa u dhiganta madaxa leh timo gaagaaban. Jaakada, labalaabka, cimilada u adkeysata cimilada waxay leedahay jaakad banaanka ka baxsan oo jilicsan oo jilicsan. Koodhku wuxuu ku yimaadaa midab kasta marka laga reebo caddaanka, oo ay ku jiraan casaan, guduud, madow, ciid iyo midabyo kala duwan oo cawl ah, oo badanaa leh dhego madow, xuubka iyo caarada dabada. Midabka jaakadda ugu dambeysa ee Cairn way adag tahay in la sii saadaaliyo maaddaama jaakaddu is beddesho marar badan dhowr sano.
jack russell isku dhafka chiwawa
Cairn Terrier waa digtoonaan, dhaqdhaqaaq badan, adag, eey yar. Daacadnimada, xiisaha leh, faraxsan, jecel iyo saaxiibtinimada leh, waxay ku raaxaystaan ​​la ciyaarista carruurta. Madaxbanaan, laakiin way dhageysan doontaa haddii ay aragto in aadanaha uu ka maskax adag yahay naftiisa. Milkiilayaasha Meek iyo / ama dadban waxay u arki doonaan eeyga mid ula kac ah. Noocan ayaa la bari karaa inuu sameeyo tabo. Ugaarsade ugaarsi aan cabsi lahayn, Geesi ayaa jecel inuu qodo. Iyada oo ku filan jimicsi maskaxeed iyo mid jireed oo ay weheliso hoggaan joogto ah waxay noqon doonaan kuwo deggan oo sahlan. Cairns waxay si fiican ula qabsadaan iyaga guryo cusub . Waxay ubaahan yahiin adag, laakiin aan adag, tababar iyo anshax. Iyadoo aan hoggaan sax ah , Cairn karaa noqo mid wax dumiya iyo / ama ciil xad dhaaf ah . Hadday bartaan a bakayle ama xayawaan kale oo yar ayaa laga yaabaa inay iska daayaan cayrsashada. Ha u oggolaan in eeygan yar uu horumariyo Cudurka Dog yar , dabeecadaha bini'aadanka ee kiciya halka ay aaminsan yihiin inay yihiin hogaamiyaha xirmada aadanaha. Cairns oo leh cilladan cillad maskaxeed waxay soo saari doontaa dhammaan noocyada heerar kala duwan ee dhibaatooyinka dhaqanka, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn kala-go'id walaac , madax adayg, xoqid, ciil iyo ilaalin.
Dhererka: Ragga 10 - 13 inji (25 - 33 cm) Dumarka 9 - 12 inji (23 - 30 cm)
Miisaanka: Ragga 14 - 18 rodol (6 - 8 kg) Dumarka 13 - 17 rodol (6 - 8 kg)
Badanaa xasaasiyad ku leh boodada. Miisaan buu yeeshaa si fudud.
The Cairn Terrier way ku fiicnaan doontaa aqalka dhexdiisa haddii si ku filan loo jimicsado. Waa mid aad u firfircoon gudaha gudihiisana wax caadi ah ayuu sameyn doonaa bilaa daarad la'aan.
Kuwani waa eeyo yar yar oo firfircoon oo u baahan a socod maalinle ah . Cayaartu waxay daryeeli doontaa baahiyo badan oo jimicsi ah, si kastaba ha noqotee, maadaama oo dhammaan noocyada cayaaraha aysan buuxin doonin dareenkooda aasaasiga ah ee socodka. Eeyooyinka aan helin socodka maalinlaha ah waxay u badan tahay inay muujiyaan dhibaatooyinka dhaqanka. Waxay sidoo kale ku raaxeysan doonaan rooti wanaagsan oo ka baxsan aagga furan ee ka baxsan hoggaanka, sida barxad weyn oo ood leh.
Qiyaastii 2-10 eyyo
Jaakadaas 'dabiiciga ah' ee shagagga leh ayaa runtii qaadata xoogaa dayactir ah iyo jaakad la dayacay ayaa goor dhow noqota mid laga xumaado, oo qasan. Caday dhowr jeer usbuucii, adigoo u jilicsan dharka hoose ee jilicsan. Bishiiba mar, eyga maydh oo caday jaakadda inta uu qallalayo. Ku wareeji indhaha iyo dhegaha maqas aan qummanayn oo si joogto ah cidiyaha u jar. Cairn wax yar ayuu ku daadinayaa timo la'aan.
Cairn Terrier wuxuu asal ahaan ka soo bilaabmay 1500-meeyadii, buuraleyda Scotland iyo Isle of Skye waana mid ka mid ah cabsidii hore ee Scotland. Hal dhibic waxaa loo tixgeliyey inay yihiin isku nooc Terry Iskotishka iyo West Highland Terrier-ka Cad ilaa iyo 1900-meeyadii markii noocyadu bilaabeen in gooni gooni loo dhasho. Cairn ayaa sidoo kale la sheegay inuu xiriir la leeyahay Skye Terrier . Cairn waxaa loogu magacdaray habka ay ugu cadaadinayso 'cairns' oo ay ugu ciyi doonto dawacooyinka iyo bajaajleyda ilaa beeraleydu ay imaan karto si ay u disho. 'Cairns' waxay ahaayeen godad dhagax ah oo ay kuyaalayeen calaamadaha iyo dawacooyinka, badiyaa dhagaxaan yar yar oo loo isticmaalo in lagu calaamadeeyo xuduudaha beeraha Scottish iyo qabuuraha. Nooca ayaa markii ugu horreysay si cad loo soo bandhigay 1909 wuxuuna caan noqday wixii ka dambeeyay 1930s. Waxaa marki u horaysay aqoonsaday xisbiga AKC sanadkii 1913-kii. Wuxuu ahaa Cairn Terrier ka ciyaara Toto 'The Wizard of Oz.' Qaar ka mid ah hibooyinka Cairn waa ugaarsiga, raad-raaca, tijaabooyinka dhulka la taga, ilaaliyaha, firfircoonida, u hoggaansamida tartanka iyo qabashada tabaha.
Scottie the Cairn Terrier oo qiyaastii 3 jir ah— 'Scottie waa la soo badbaadiyey maadaama gaariga naga horreeyey uu gaabis ku dhacay oo lagu tuuray waddo gadaal ah. Wuxuu ahaa fawdo iyo maqaar laf. Anigu waan koriyey oo waxaan ku soo ceshay isaga oo caafimaad qaba. Dhawaan wuxuu aadi doonaa gurigiisa cusub weligiis. Isagu waa nin caqli badan, daacad ah oo nin dabacsan oo yaqaana goorta la ciyaarayo iyo goorta la fududeeyo. Waa ilmo weyn! Eyga aan korsado ee ugu fiican weli. Waxaan kuugu hambalyaynayaa Scottie gurigaaga cusub !! '
Scottie the Cairn Terrier oo qiyaastii 3 jir ah oo xiran a kooxda caloosha eeyaha
Basbaas Cairn Terrier
Whitty-Sue Cairn Terrier oo 3 jir ah
'Harper the Cairn Terrier at 9 toddobaad jir waa uun a xirmo tamar ah ! Way adkeyd in la helo iyada si ay u sii joogto waqti dheer oo ay ku hesho sawirkan. '
Feeryahan Eey 4 bilood jir ah
Bonnie madow-brindle Cairn Terrier at 3 sano jir- Waxaan ka soo iibsaday Bonnie breeder markii ay ahayd cunug 10-toddobaad jir ah. Iyadu waa qof caqli badan oo qurux badan. Waxay jeceshahay inay aaddo kalluumeysi iyo tamashle waxayna jeceshahay biyaha. Waxay ka ilaalisaa barxadeena jiir, gophers iyo bakayle. Waxay jeceshahay cayrsashada diyaaradaha, hawkarrada, iyo gorgorrada, mana muujiso wax cabsi ah. Waxaan tagnaa masaafo 1/2/2 ah socod maalin kasta . Bonnie waxay ahayd mid aad u heer sarreysa sanadkeedii ugu horreeyay, aadna way u deggan tahay. Dhibaatada kaliya ee aan ku tababaray iyada ayaa ahayd iyada ka jabinta calalinta . Waxay ahayd maaweelo badan oo aad u xiiso badan. Ha ogeyn waxa aan sameyn lahaa iyada la'aanteed. '
Bonnie madow-brindle Cairn Terrier at 3 sano jir
Bonnie-brindle-ka madow Cairn Terrier ee 3 sano jir ah oo ku jirta biyaha iyada oo jaakadeedu gaaban tahay.
Bonnie madow-brindle Cairn Terrier sida eey
Eeg tusaalayaal badan oo Cairn Terrier ah
Cairn Terrier Sawirada 1
Cairn Terrier Sawirada 2
Cairn Terrier Sawirada 3
Eeyaha Cairn Terrier: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
madow iyo tan gorgor yar yar
9 wiig jir feeryahan ah
waa maxay cabirka shiloh